Coulda Na Me — njem Lee - Official Site
Obi m na-arọ. M maara na Chineke dị mma, nakwa na Ọ bụ na-achịkwa, ma obi m na-arọ.
Ikpeazụ izu mgbe ihe na Ferguson (na Ibọrọ ya na mmadụ mgbasa ozi), Na m nwere obi anyịgbu dee a song. My mgbaru ọsọ bụ ime ka ihe ọ bụla magburu okwu ma ọ bụ declarations, ma na-egosipụta n'ụzọ ihe niile mere ka obi. N'ihi ya, m malitere ekewetde, na nke a bụ ihe we puta. The mmetụta na kwughachiri dị m n'obi bụ: "O nwere otú na na m."
M nwere a dum post njikere on otú Ndị Kraịst kwesịrị ikwu na oge ahụ, ma mgbe akukọ Eric Garner ụnyaahụ, M kpebiri na m na-eche na post na mgbe e mesịrị. Maka ugbu a, M nnọọ na-ekwu na m nwere oké obi. Enweghị m mmasị na nrụrịta ụka ma ọ bụ arụmụka ugbu. M nnọọ na nnwere onwe na-egosipụta m ewute.
M na-emejọ n'ihi na Eric Garner video na-agbalị ibibi na-ekiri. Mgbe mụ na nwunye m mbụ na-ele ya ọnwa gara aga, anyị abụọ tie. Ndụ bụ a mara mma onyinye, na ọ bụ akpali iche echiche na-ekiri na ndụ ahapụ onye ahu - karịsịa mgbe ọ na-e site ndị ikom ndị ọzọ. m chere, "N'ezie, ndị mmadụ enweghị ike pụọ na na. Ọ dịghị ihe ọzọ ha ga-aza ajụjụ maka omume ha na a ikpe. "
M chere ezighị ezi. Na na-ewute.
M na-emejọ n'ihi na ọ bụ dị ize ndụ na-a nwa nwoke na America. Ama m na nkwupụta bụ nanị ya bụ mkparị nye ụfọdụ ndị, ma ọ bụ anya ezi.
M na-emejọ n'ihi na nwa obodo-emerụ, enwe tinyere n'ihi ọtụtụ nsogbu.
M na-emejọ n'ihi na nke iju ọsọ-ins M na nwere na cops na n'oge gara aga.
M na-emejọ n'ihi bụla nwa nwoke m maara nwere yiri ọsọ-ins.
M na-emejọ n'ihi ihe ọjọọ cops ime ka o sikwuoro ndị ezi cops ime ọrụ ahụ dị mkpa ha na-akpọ na-.
M na-emejọ n'ihi na m nwere ịkụziri nwa m nwoke otu ihe nna m na-akụziri m: "Ndị mmadụ ga-ewere ya na ị na-a iyi egwu n'ihu ha maara ihe ọ bụla banyere gị, otú i nwere ịkpachapụ anya karịa gị na-acha ọcha enyi eme. "
M na-emejọ n'ihi na ụfọdụ ndị anaghị eche. Ha ga kama irite esemokwu karịa ewute na ndị na-afụ ụfụ.
M na-emejọ n'ihi na ndị ọchịchị na-enwekwa ndị mmehie na brokenness ndị na-adakwasị ndị fọdụrụ n'ime anyị. Mgbe ndị na-akpọ ndị uwe ojii na-eme mmehie bụ ndị ikpe mara nke ya onwe, Ebee ka anyị na-atụgharị? M na-aṅụrị ọṅụ n'ihi na m nwere onye ukwuu ịgakwuru, na m olileanya n'ihi na Chineke ga-eme ka ikpe ziri ezi na ọgwụgwụ. Ma nke ahụ apụtaghị na m na-adịghị emerụ.
M na-emejọ n'ihi ọdachi ndị na-media mkpuchi na-abụghị nanị ọdachi. E nwere ọtụtụ ihe.
N'ihi na ndị enyi m na-adịghị aghọta, biko wepụta oge na-ege ntị na ịghọta. Ịbụ "emee ihe Chineke gwara na onye na-adịghị ekwu okwu" na-a akara nke ịdị umeala n'obi na okè. Tupu ị jụ, wepụta oge iji nuru ihe ndị na-ewute.
Ya mere, ọtụtụ n'ime anyị na-emejọ n'ihi na anyị na-eche ka onwe anyị, “Ọ pụrụ na na m.”
*Gụọ ihe ndị na lyrics na song Ebe a
Joshua • December 3, 2014 na 11:30 pm • zaghachi
ka ya fam. i na-eche ihe mgbu gị
Cisco • December 3, 2014 na 11:30 pm • zaghachi
Coulda kemgbe m !!
Jeremiah • December 3, 2014 na 11:32 pm • zaghachi
M na a na-enwe otu echiche, na ọbụna ihe banyere otú ndụ pụrụ-anapụ na na mmadụ nwere ike ịnwụ n'amaghị Chineke. Ọ n'ezie scares m na-ewute m na- <3
Shana • December 3, 2014 na 11:37 pm • zaghachi
Ee Jehova, ọ dị mma
Marco • December 3, 2014 na 11:38 pm • zaghachi
Ere na ị, i dont ghọtara ọnọdụ 100% ụzọ na-adịghị m nwere ike. M na-aghọta Jesus na onye anyị kwesịrị ibi ndụ dị ka. na-eje ije, mgba, emejọ na-agbalịsi ọnụ.
Sam • December 3, 2014 na 11:40 pm • zaghachi
Daalụ maka ekere òkè gị obi, na maka iji gị talent na-etinye ya music. Ọ sickens na-ewute m bụghị nanị na ndị mmadụ na-na-gburu, ma na ọtụtụ (gụnyere ọtụtụ Ndị Kraịst) jụ ahụ kpasuru iwe na-ezighị ezi.
“M na-emejọ n'ihi na ụfọdụ ndị anaghị eche. Ha ga kama merie esemokwu karịa ewute na ndị na-afụ ụfụ.”
Ya mere,, bụ eziokwu, njem. :(
Kpee ekpere, ekpere m na ụmụnne m & ndị nwanyị.
MelissaMcKim • December 3, 2014 na 11:40 pm • zaghachi
M chọrọ n'ezie ịzụta a song!
I kwuru ihe ọtụtụ obi na-eche
Nke a ozi m
Daalụ maka iji onyinye gị na-ekwusara ya ndị anyị niile
Kirk • December 3, 2014 na 11:45 pm • zaghachi
m a Native American si calera, Oklahoma. M a Choctaw Indian na mgbe anụ banyere Ferguson a di na nwunye izu gara aga na m na-aghọta na-akpọ asị na ihe mgbu na-akpata na ọ bụ ike ịbụ a dị iche iche agbụrụ na taa afọ bụghị nanị na ha kpọrọ asị ọ bụla agba akpụkpọ ha na-na-nnwere onwe anyị iji na-akwalite Chineke na anyị na-ejighi anyị ọrụ na-akpata na ọ bụ na ọ bụ njọ ma m ekpe ekpere na ụwa a ga-esi ka mma ma m na-echeta mgbe niile na Chineke nwere atumatu maka ihe niile ma ọ bụ ihe ọjọọ ma ọ bụ ezi anyị dị nnọọ mkpa okwukwe na nke ahụ bụ ihe anyị na-enweghị ọzọ anyị adabere ukwuu na ndị ọchịchị kama ịdabere n'ebe Chineke !
Tyler • December 3, 2014 na 11:47 pm • zaghachi
Hụrụ gị n'anya nwanne. Na-elu na mma agha. Ikpe ekpere maka unu.
Jordan • December 3, 2014 na 11:48 pm • zaghachi
Ihe ịtụnanya song. Dị Mkpa maka na-eto eto na-anụ ma na-amụta site na. Jide ka njem
Joel Benjamin Neve Islander • December 3, 2014 na 11:52 pm • zaghachi
M ebe a na Uganda ma obi m na-arọ dị ka nke ọma. otú arọ. Eric Garner, mmezi Rice, Mike Brown. otú arọ.
DustinSimmons • December 3, 2014 na 11:56 pm • zaghachi
Nice ụtụ na-anọchite anya nwa ndụ na ihe na-agaghị eleghara anya na anya nke ụwa. A usoro na anyị na dabeere na n'oge anyị obere nleta na Earth na-emezughị anyị, ugboro ugboro, ruo n'ókè anyị na-atụ egwu maka ndị anyị hụrụ n'anya na onye ọ bụla ọzọ. M na-atụ na anyị nwere ike niile ka anyị na-anya Jehova, na-eto eto ná mma dị ka otu ndị, Ndị Chineke. Kwụsie ike na okwukwe na-arụsi ọrụ ike, GAWVI na Njem Lee! Grace na udo!
Neal_Spencer • December 3, 2014 na 11:56 pm • zaghachi
M nnọọ chọrọ iji zitere gị a ozi. Man, gara aga di na nwunye nke izu ndidi siri ike n'ihi na mụ onwe m pue. M a uwe ojii na ọ meela n'ezie siri ike ịhụ ụfọdụ nke ọkacha mmasị m ndị mmadụ (rappers, ọbù-abù, enyi, wdg) ekwu okwu banyere ndị uwe ojii na otú ha nwere. Ná mmalite m iwe, nkụda mmụọ, na njikere na-arụ ụka na ụwa banyere otú ha aghọtaghị otú siri ike ọrụ anyị bụ, banyere otú egwu na ọ pụrụ ịbụ na mgbe ụfọdụ… Echere m na m bụ na ya bi a afụ, n'ihi na ihe m na-agụ banyere nke, ihe m na-ekwu ka ndị enyi m, agụ y'all si statuses banyere otú ị na a na-akwụsị ihe site cops, nwere gị ụgbọala chọọ ọzọ, na otú pụta… M nnọọ chọpụtara na m na-n'ezie dara mbà n'obi banyere dum isiokwu.
M nwere onwe m ụzọ nkwụsị ugbo ala. M kwụsị ha dabeere nnọọ nkịtị ihe 80% nke oge (kubie ume ndebanye, insurance, wdg) n'ihi na nke ahụ bụ m “colorblind” ụzọ na ịkpọtụrụ ndị mmadụ. Mgbe ahụ ndị ọzọ 20% nke oge bụ ọ bụrụ na ụgbọala ihe nnọọ enyo na-ahụ na m ga-ekwere onye na-enweghị a uwe ojii na ọzụzụ ahụ ga-eche bụ weird ma ọ bụrụ na tasked na otu ozi m. The ebe m na-agbalị mee ka bụ na m na-agbalị ime m mma ka ele mmadụ anya n'ihu, nke mere na m na-adịghị Anam Udeme a ụgbọ ala n'elu n'ihi na ọ na anya “sketchy” ma ọ bụ n'ihi na onye na-akwọ ụgbọala ya anya “dị ka a agboro”. Ihe bụ, M mara mma obi ụtọ banyere otú m na-eme m ọrụ, ma na-eto Chineke n'ihi na. Echere m na ebe m na-dara mbà n'obi ezie, bụ na m na-eche otú obere na a BIG nke. Ka m na-arụrịta ụka banyere, ihe m na-ege ntị m Black na Arab enyi na-agwa m banyere ha akụkọ nke sketchy searches na puru omume na-akpata etc. ihe m ghọtara na m enweghị echiche otú aka na nsogbu a.
M maara na m kwesịrị ikpe ekpere, na m n'ihi na m maara na nza nke ọma cops si n'ebe ndị na-agbalị ha kacha mma na ndị hụrụ ọrụ a niile nri ihe… Ma m maa mmadụ nganga na m chọrọ na-enwe ike idozi nsogbu a na-eguzosi ike na-abaghị uru mgbe a nke na-aga n'ihu gafee America. Ọ bụ naanị ike nwoke… Ya mere,, Echere m na nzube nke a dee bụ na-ekwu, M na-eche ihe mgbu gị nwa osisi. M na-eche na ihe mgbu nke ọtụtụ ndị enyi m bụ ndị e doro sketchy uwe ojii ọrụ. Na maka ihe ọ pụtara / eme ka elu maka, M chọrọ ịrịọ mgbaghara maka ihe ọ bụla ajọ ọnọdụ ị na a na-etinye site na site n'ime anyị. Na akụkụ nke abụọ nke a dee bụ nnọọ a ekpere arịrịọ, na-isi m elu na ịchọta ụzọ ka ọ ka mma m obodo, m ọrụ n'ebe onye ọ bụla. Ọ na-akawanye na-akụda mmụọ mgbe ị na-ahụ nsogbu na ị na-amaghị otú idozi ya.
Ndenye ikpeazụ ebe, M hụrụ n'anya song nwoke. Ọ we me ka anya mmiri na-anọ amaokwu ebe i nyere a tie mkpu si na ezi cops. Daalụ maka na nwoke!
Na ukwuu ịhụnanya na nkwanye ùgwù,
Danielle • December 4, 2014 na 11:59 Abụ • zaghachi
Nke a metụrụ m n'obi. Daalụ maka gị uzo n'eziokwu. M ekele unu maka ịbụ a Chineke na-atụ egwu n'anya onye họọrọ asọpụrụ iyi ị were na-echebe ma na-eje ozi. Biko ga-abụ ìhè post gị ọrụ nakwa na ịdị umeala n'obi gị Honor na amara ga-amụkwasị ndị ọzọ Police ọrụ nche ka unu wee nwee ohere na-ezi ozi ọma na ha. Na site na ị ọzọ mgbanwe mbet na-edu ndú ga-enwe. Ka Chineke gọzie gị aka na ụkwụ na ọnụ ịkọrọ eziokwu a ụbọchị niile nke ndụ gị. Ugbu a ị maara gị ozi! #telltheworld #lovehard #overcome
Aj_cthingswell_FbAjHowardbentleyCaldwell • April 8, 2015 na 10:41 Abụ • zaghachi
Chaị! na song na ọ bụ onwe ya siri na nnọọ n'obi ma na ndetu n'ezie kụrụ a ebe. A izu ole na ole azụ m nọ na-enweta gas na a steeti mgbapụta na ọrụ m na-achọ ka anyị na-na-gas na na m ga-ahụ sheriffs na-gas dị ka nke ọma na onye ọ bụla m ga-ahụ m ga-subconsciously tensi elu bụghị egwu nke onye ezie n'ihi na m amaghị ha na-atụ ụjọ na ha ma na ọ nọ nnọọ na-abụ nke a na-ata mmetụta, n'ihi na-eto eto ke isua 90 na-a uwe ojii m n'ezie na-ele anya ha dị ka ndị dike na ahụmahụ ndị dị ka njem lees na niile nke isiokwu na song m visual nke ha na-dike e ruo mgbe ebighị ebi gbanwere. Ọ bụghị na a na-adịghị mma ụzọ ezie n'ihi na m nnọọ nanị na-ahụ ha dị ka ihe ha bụ n'ezie na njedebe nke ụbọchị.. A mmadụ.. Na m ekele Chineke na o mere ka m na-ahụ ha dị ka nke ahụ n'ihi na ị na-na-emekarị-ahụ (ọma m na-agaghị ahụ ya akpa ọchị) nkịtị na-atọ ọchị akwụkwọ-ekpe ekpere maka ndị dike. Ma nke ahụ bụ ihe e birthed n'ime ndị mere… N'ihi na n'etiti ndị m erughị ala na-atụ egwu ha na-enwe a ọjọọ ụbọchị ma ọ bụ ọbụna na-atụ egwu ha banyere m onye a na steeti gas mgbapụta na a hoody (ọ bụ ezie na ọ bụ oyi si), etinye gas na unmarked niile na-acha ọcha van (n'amaghị na m na-enye njem mmadụ na ndị nwere ọgụgụ isi nkwarụ na-arụ ọrụ),wee a ọmịiko mmetụta ọjọọ n'ihi na ha n'ihi na ha nwere ike egwu m ịbụ na otu onye na-ebo na / ma ọ bụ kpasuo ha na-eme nke okwu si egwu ha ndụ ma na aha. Ya dị nnọọ a jacked elu ọnọdụ a na bụ n'ụzọ doro anya a atọ nke ndị iro ịkpata nkewa na-anyị iche otú ahụ Kraịst ga-abụ na otu n'ihi na ọ maara ihe nwere ike iri ebe mgbe nke ahụ bụ ya mere. Ma obere ka ọ maara na mgbe ọ na-eme na ọ na-emepụta 23 afọ nwoke ekpere dike onye na jidesienụ ihe ọ bụla ọzọ ma ọ bụ ihe ọ bụla na-erughị Onyenwe anyị Jizọs Kraịst ikpeazụ ndị a na ihe ọjọọ ụbọchị. Neal m olileanya na-ekpe ekpere na ị dị nnọọ adị umeala n'obi nakwa na ọnọdụ ọ bụla i nwere ike tinye n'agbanyeghị ikuku na-aga gị amara dị ka a na nwa nke theMmost elu Chineke. -agọzi!
Kevin • December 3, 2014 na 11:59 pm • zaghachi
Hey njem.. ọ ga-nke a na ị ime ka Chineke na-nwetara aka-ya na ị. M belive na ihe nile na-eme n'ihi na a mere. Nke a bụ ohere i jikọọ na ndị ọzọ ndị mmadụ mgbe ahụ ị ga-were. ndị mmadụ na-achọ azịza ha dị nnọọ mkpa na ha Ihọd na-abịa tinyere na spred ọma site music, ọmụmụ Bible ma ọ bụ dị nnọọ nọdụrụ ala na-enwe obi na obi n'elu kọfị. Echere m na ihe m na-agbalị ikwu dị ka Andy Mineo etinye “Anyị livin na a gbara ọchịchịrị n'ụwa otú ha etinyecha mara ma ọ bụrụ na anyị anaghị etinye ebube ya na ngosi ka ọ na-egosi ka e ìhè”.
ndị a • December 4, 2014 na 12:03 Abụ • zaghachi
Daalụ maka gị niile music. Ị na dum 116 click. Chineke na-n'ezie iji unu na-ekwu okwu ka m na ndị ọzọ nke na-eto eto, ma na ọgbọ na-abịanụ! M na-atụ anya otu ụbọchị, Chukwu kwado, pụta nyere gị aka pụta na ndị ike ike agbata gị kọwara na otu n'ime gị ajụjụ ọnụ.
Quentin Holland • December 4, 2014 na 12:04 Abụ • zaghachi
ike song…. obi m na-arọ ugbu a ịbụ nna 3 eto eto African American ụmụ nwoke. Ha na-ahụ na ha nwere ohere ịghọ president nke United States ma na-aghọta na ha nwere ike ghara ịdị ndụ iji mee ka ọ n'ọnọdụ ụfọdụ…
Ọ bụ ok ewute. Ụwa jupụtara unyi….
mmiri (spirit) na Ọkpara (Jesus) nwere ike ikwe ka ihe mara mma na-eto eto….. m olileanya na Ya
Tjay • December 4, 2014 na 12:14 Abụ • zaghachi
Aka ala ịnọ na. Nke a track n'ụzọ doro anya na-akawanye n'ókè gafee. The ọnọdụ bụ pụghị ịgọnahụ na mwute na obi m na-arọ. M a na-acha ọcha nwoke ma toro gburugburu ndị mmadụ nke na agba. Ọbụna nso ezinụlọ bụ nke na agba. M toro n'otu nke siri ike karị agbata na Providence, RI si ala Ndida na m maara nke ọma ihe na-ezighị ezi na-eme gafee mba. Iji “echebe ma na-eje ozi” kwesịrị ọ bụla ọrụ na-emetụta ma green, acha anụnụ anụnụ, nwa ma ọ bụ na-acha ọcha. History naanị akuko onwe ya ma ọ bụrụ na ndị mmadụ anaghị agbanwe… M anya na a-abịa na njedebe na ndị a nile na merụrụ na usoro nwere ike ịhụ udo. #AllLivesMatter
Ken • December 4, 2014 na 12:25 Abụ • zaghachi
Buru na ị m dị egwu, Ị readin gị post ama m na anya mmiri. IMA 25 afọ Mexico na nwoke m obi e mere burddened ebe ọ bụ na mike aja aja oku, m Popz a cop ịhụ stof ka a na-eme ka m na-echegbu onwe ma m maara na onye na-ekpuchi anyị. Mgbe ọ hụrụ nke a taa m Ị cryd dị egwu na-ekpe ekpere ka a ọrụ kpọlitere maka owuwe ihe ubi. Ọ bụ anyị na ọgbọ dị egwu letz na-na ịpị na Ya! Ịhụnanya ị Bro
meldd • December 4, 2014 na 12:33 Abụ • zaghachi
na-eto eto, Ahụghị m ihe ọ bụla-eme nke ga-eme ka m na-eche na ịkpa ókè agbụrụ ka gburugburu. M hụrụ n'anya mmadụ niile na m dum obodo chere otu (ma ọ bụ otú ahụ ka m chere).
ugbu a, M na-ahụ ihe ndị a niile ọdachi&iwe ọkụ. M na-adịghị aghọta ihe ndị mmadụ gburugburu m ọzọ. Olee otú nke a niile na-abịa na-agafe? M chere na anyị bụ ndị gara aga a..
Lena • December 4, 2014 na 12:36 Abụ • zaghachi
dị ike: lyrically na musically. Anaghị m aga na kpọọ, anyị nile bụ ndị mmehie, ha adịghịkwa eru ebube Ya. Ma m a na-acha ọcha girl. Dị nnọọ ka m ga-amasị-eche na agba abụghị mkpa-ọ bụ n'ebe a na mba na ụwa. Dị ka onye mmehie: ọ coulda kemgbe m. Dị ka a ogbenye ọcha girl: enwere ike, ma eleghị anya ọ bụghị. Na na bụ obi ọjọọ na mwute.
M n'anya otú nke a song na-agwụ: m olileanya na Ya. Peace na nnabata-abịa mgbe olileanya anyị, okwukwe, na ịhụnanya bụ na Ya.
Miguelperez • December 4, 2014 na 12:55 Abụ • zaghachi
Nke a bụ ndị dị otú ahụ a mara mma ihe i dere na-ekwu eziokwu na m ụtọ na i mere ihe na-erikpu n'obi gị banyere ndị a okwu na ọ na-emeghe anya m ọzọ na nsogbu nke ime ihe ike na oyụhọ U.S. nke bu n'obi na-eleghara ma ọ bụ ileghara ka ihe dị mkpa ozi ọma. Ekele gị ịkwada lee.
Damian • December 4, 2014 na 1:01 Abụ • zaghachi
Kwusara Ozi Ọma!
Mac • December 4, 2014 na 2:13 Abụ • zaghachi
Man, M na-agụ gị okwu n'abalị. Ha kụrụ m ike. Nke a na ajọ okirikiri mba a bụ na…jaded cops ezubere iche na-eto eto na nwa, n'ihi na mmadụ dabara a profaịlụ…-eto eto na nwa ikom na-ike gwụrụ nke na-ezubere iche na guzo na-ekwu okwu onwe ha…
Ị hụrụ, anyị daa uwa na-eweta na ọ ọchịchọ compartmentalize ahụmahụ anyị. Onye gāta dị ka nkịta dị ka a na nwa, emekarị ọkọride na mkporomaasi ka niile canines…ma dị ka egwu ma ọ bụ ịkpọasị. Nke ahụ nwere ike ịbụ ya mere ike imeri, n'ihi na anyị na-ekwe ka ndị mmetụta…mgbe ụfọdụ azụlite ha na-eri nri ha na ụmụ obere rationalizations.
Tripp, M na-acha ọcha. Ruo mgbe m 4th ọkwa afọ, M na-eto dị ka otu n'ime a obere ọgụgụ dị nta nke na-acha ọcha na na na a predominantly black obi ke ndịda Illinois. All enyi m bụ ndị oji. mgbe ahụ, anyị kwagara Tennessee. M ọkọdọ zigara ndị isi ụlọ ọrụ ahụ ugboro atọ n'afọ maka ọgụ na onye ama esịn na “N-okwu”…Nke 4 ọkwa…ụmụaka ama a kụziiri ịgụnye ma na-eleda ndị ọzọ….n'ihi na nke acha. Na okwu infuriated m…ruo n'ókè m ga Punch ị na ọnụ na-ekwu ya. Ọ ka na-infuriates m…M ekpe ekpere naanị kama ntụmadị ugbu a.
Man, M nwere ikwu nke ọ bụla na agba na ndò nke akpụkpọ….na, ị ma nke mere? M mpako nke IT. My ezinụlọ osisi bụ kpọmkwem ihe na-eme ka America oké. My ezinụlọ BỤ American agbaze ite. My ezinụlọ bụ ihe ịtụnanya na m hụrụ n'anya ha niile.
A di na nwunye afọ gara aga, M na-ebe a mkpari ịgba alụkwaghịm na site m nzuzu, biri nọsịrị oge ụfọdụ n'ụlọ mkpọrọ na ugbu a nwere a felony ndekọ. M na hụrụ mbụ aka na mmetụta nke ihe ọjọọ cops. ugbu a, oge obula a patrol ụgbọ ala na-akawanye m n'azụ ma ọ bụ a cop ejegharị gara aga m, M na-eche, “Gịnị ka ha na-etinyecha-eme nke a oge? Gịnị ka ha na-etinyecha dọpụtaara inye ha a kpatara ebịne m. N'ihi na mgbe ha maara na ị na-na na na usoro…ị a mpụ maka ndụ.” Na mgbe ahụ, m nwere chegharịa n'ihi ịbụ warara kpọrọ na bigoted. Ha na-ekwu otu ihe ọjọọ apple emebi ụyọkọ, ma ọ bụghị Chineke anyị n'onyinyo nke apụl…O mere anyị n'onyinyo Ya. Na-nwetara ịgụ ihe, nri?
-eme ihe n'eziokwu, Bro…mgbe na-agụ gị okwu na ịtụgharị uche na ha ma na-achọ azụ ndụ m….na ike na na na m, oke.
M na-adịghị na-ekwu na egwu ma ọ bụ na-ewepụ ike ndọda nke okwu gị. Ọ bụ naanị ndị na-abụghị. E nwere nsogbu, ma nwa ọcha na nke abụghị a nwa & ọcha nke. Onye ọ bụla bụ dị iche iche na-adọta na ha onwe ha ndụ ahụmahụ-eme ziri ezi n'echiche nke onwe ha nke a dara n'ụwa anyị bi na ya. Ihe bụ nsogbu bụ mmehie. Anyị niile bụ ndị ikpe mara nke ya. Ana m ekele Chineke na e nwere ndị si n'ebe ugbu a na na-erube isi Okwu Ya na na-agbalị inyere agwọ. M nwetara gị na ọtụtụ ndị ọzọ na m na-ekpe ekpere n'abalị. ịhụnanya dị ukwuu.
Mac • December 4, 2014 na 2:17 Abụ • zaghachi
“Ma amamihe nke si n'elu bu ụzọ dị ọcha, emekwa udo, nwayọọ, emeghe ịtụgharị, jupụta n'ebere na ezi mkpụrụ, ele mmadụ anya n'ihu na ezi obi. Na a owuwe ihe ubi nke ezi omume a na-agha n'udo site ndị na-eme udo.”
Jamie • December 4, 2014 na 4:18 Abụ • zaghachi
M na-diggin ya. Kpamkpam hụ ebe ị na-na-abịa site Tripp.
Stephlandry09 • December 4, 2014 na 6:42 Abụ • zaghachi
Ọ bụ ezie na m nwere ike ikwu na nke a na ihe niile ebe ọ bụ na m na a na-eto eto na-acha ọcha nwaanyị, a mere ka anya mmiri m anya. My obi kemgbe arọ site si dum Ferguson ikpe. Daalụ maka na-ekwu okwu a na-ekere òkè gị ahụmahụ.
AaronCrim • December 4, 2014 na 7:23 Abụ • zaghachi
Daalụ njem, M hụrụ nke a na-enye aka. Mụ onwe m bu a na-acha ọcha Christian si Wv, M na otụhọde ihe na-eme ka ihe ndị a. Ọ bụghị n'ezie n'aka na ihe na-eche echiche, (ka ha n'ezie na-adịghị emetụta m ozugbo) M Otú ọ dị nnọọ gbawara ịhụ ka ọtụtụ ụmụnna m na ụmụnna nwanyị na-emejọ na-ekewa. Obi gbawara ịhụ ka ọtụtụ nke m obodo emejọ. Ekele ọzọ n'agbanyeghị ịbụ nke a nyeere m aka ịghọta a obere ihe na-enyere m aka ịmata otú mma-ekpe ekpere maka ịdị n'otu na udo. Chukwu gozie
jeanine pinkney • December 4, 2014 na 7:29 Abụ • zaghachi
Ekele gị nke ukwuu maka nke a song. Nwanne m nwoke zitere m na njikọ na im ekele nke a ụtụtụ maka ngọzi a. M ka m a aja, M furu efu nwa m Rashad Pinkney December 21,2013. Na-amaghị egbe ime ihe ike. Ọ bụ ihe ihere otú anyị na-ewe ndụ anyị. Black na Black mpụ bụ a nkịtị ụzọ nke ndụ anyị obodo. Ya mere ọtụtụ ndị anyị na-eto eto na ndị mmadụ nwere oge bara uru maka ndụ. M na-afụ ụfụ mgbe niile n'ihi na m na ọṅụ e, M mwute n'ihi na e nwere mba ngosipụta, M mwute n'ihi na m na-adịghị aghọta, M nnọọ na-afụ ụfụ!!! Ma m ka na-ebi maka na n'anya Chineke m!!!
TerryMiller • December 4, 2014 na 7:40 Abụ • zaghachi
Ị mara, njem, M nwere ike ikwu ihe ọ bụla otu ụzọ ma ọ bụ ndị ọzọ banyere dum omimi nke nke. M a na-acha ọcha nwoke. M na-adịghị ahụ ịkpa ókè agbụrụ dị ka a nwa nwoke ka. M biri site na ya. ma, ihe m maara bụ, a song bụ a hit. Ike ịbụ a nnukwu hit, Echere m, ma ọ bụrụ na na-akwalite site na kwesịrị ekwesị ọwa. agbanyeghị, ya'll ka ezigbo on ebe na na, otú dị nnọọ na otito, Dude. No, Echeghị m na onye ga-capitalize na a ọnọdụ ọjọọ. ma, ma ọ bụrụ na i kwere na ọ bụ ihe ị na-na na mara na hụrụ, mgbe na-agba ọsọ na ya. Ọ bụ ndụ n'ezie stof ị na-ekwu okwu banyere ebe. All nke ị Iru nka ga hapụ a mkpokọta album ma ọ bụ mkpokọta. Ma eleghị anya, ọbụna e.p. Weta mmata uru enweghị niile negativity na ego nka nwere ike na-na tebụl. agbanyeghị, nnukwu ọrụ ebe a!
Henry Strozier • December 4, 2014 na 8:00 Abụ • zaghachi
Great song! Daalụ maka ekere òkè gị obi anyị! Nke a bụ nnọọ mwute! M ekpe ekpere maka ezinụlọ nke ndị ahụ tara!
Louis • December 4, 2014 na 8:04 Abụ • zaghachi
ekele Njem, nke a bụ ihe ọma n'ihi mkpụrụ obi m.
Alasdair • December 4, 2014 na 8:15 Abụ • zaghachi
Daalụ maka drivel Njem Farrakhan.
Jacqueline Lugo • December 4, 2014 na 8:42 Abụ • zaghachi
My obi etịbede maka ụzọ nke ụwa a. Ukwuu na-ezighị ezi! Obi m na-arọ. M na-eche na ụbọchị mgbe Jehova na-abịa na-ekwu ndị Ya. Mgbe a ga-enweghị ihe mgbu. Ọ dịghị ihe ọzọ na-egbu. Ọ dịghị ihe ọzọ anya mmiri. My meteere ezinụlọ ọ bụla na-enweghịzi a hụrụ n'anya na ndị a ọdachi na ime ihe ike. Ekele gị na njem gị okwu na obi gị
Alasdair • December 4, 2014 na 8:43 Abụ • zaghachi
Dillon Taylor gbara na Salt Lake City. Ọ dịghị ngwá agha. Ọ dịghị mpụ. Ị na-amaghị atụmatụ agbụrụ pimp.
Melody • December 4, 2014 na 8:43 Abụ • zaghachi
Daalụ maka ewere oge dee banyere nke a. Ọ bụ a anya m ghara ịnụ mgbe na n'ezie nwere tụlee ruo na nso nso.
Mike • December 4, 2014 na 9:35 Abụ • zaghachi
@alasdair n'ókè ọ na-eme, nke ị na-agbalị ịfụ anya dị nnọọ ka o kwuru na song, na-na-acha ọcha uwe ojii nwere na-eme ka echiche nke nwa ikom ndị na-adịghị irè. N'ịbụ-acha ọcha na-ebi na otu akụkụ nke ezinụlọ m na nke ahụ bụ ekworo, na akụkụ nke ọzọ nke ahụ bụ ikpe African American, M nwere ike ịgwa gị na ihe Njem kwuru bụ eziokwu. N'ihe banyere Dillon Taylor, nke m ga-ekweta bụ otu n'ime ugboro ole na ole m na na na na nụrụ nke ihe dị ka nke a na-ewere ọnọdụ, ya nwere ike ịbụ otu ihe ahụ. Njem a na-ekwu na e nwere ihe ka otu ihe iseokwu na ịkpa ókè agbụrụ na ịkpọasị a na mba, na ọ bụ n'ihi mmehie dị. Na nsogbu adịghị nnọọ na-aga otu ụzọ, ma nke a song na ya na-ekwu okwu banyere kasị akpa nke na aka nri ugbu a, nke bụ ọrịa na-eto eto na nwa ikom na-na-emeso na-ezighị ezi n'ihi na ha dabara a echiche. Ị ga-ekwere ihe ị chọrọ, ma anyị na-ahụ nke, na anyị ga-eguzo imegide ya, na-afụ ụfụ na ndị na-afụ ụfụ.
Henock Aristide • December 4, 2014 na 9:49 Abụ • zaghachi
Oké mwute na ihe na-aga. Nice track Tripp.
@TheRealChrisZ • December 4, 2014 na 9:55 Abụ • zaghachi
Ikpe ekpere maka ndị na-agwọ ọrịa na idozi na naanị Jizọs nwere ike mee ka!
dabere • December 4, 2014 na 10:30 Abụ • zaghachi
M na-eche ya nwedịrị ike ịta na ize ndụ na-a na-acha ọcha na nwanyị na-adịghị a nwa nwoke. Adịghị m akpa ókè agbụrụ ma ọtụtụ n'ime mpụ ndị na-commited megide m, ezinụlọ m, na enyi m, site na nwa nwoke. M na-achọ ya wasnt ezi ma ọ bụ.
Thebiggerpicture • December 4, 2014 na 10:49 Abụ • zaghachi
Gịnị mere e ji na-eguzogide njide? Ọ na-ekwesịghị nwụrụ, ma ọ ghara e n'iguzogide ndị ọrụ nche ma. No, ya nwere ike ịbụ na ị ma ọ bụrụ na ị na-erube isi n'iwu. Gịnị kwesịrị isi agha ime iche iche? Ka ndị mmadụ mebie iwu, iguzogide njide na-aga n'ụbọchị ahụ ha? Mgbe ọ na-akwụsị? Ị hụrụ na-adịbeghị anya ọnụ ọgụgụ? Ugboro atọ ỌZỌ ọcha na-gburu ndị uwe ojii AKAN ojii. ugboro atọ. Ka na-asa na. Echeghị m na ndị isi ojii na-na-ezubere iche. Echere m na rioting, looting na ọkụ ihe ala na-aga-eme ka na-acha ọcha na ụmụ akpa ókè agbụrụ (BC ha na-ahụ ya niile na tv na-aga na-eche ihe niile ojii eme na) na m na-eche na nwa na ụmụaka na-aga na-na-eche na ọ bụ ihe ok na-eme ihe dị ka na. Enyela ndị uwe ojii a mere na- “profaịlụ.” Kwụsịnụ ime ka nwa agbata kasị dị ize ndụ akụkụ nke obodo nile. Onye ọ bụla (niile na agba) kwesịrị ịkwụsị iche echiche ha n'elu iwu na ihe ọ bụla ga-eme ma ọ bụrụ na ha na-agbaji ya. (Good song, ezie na… i nwere nkà)
Mike • December 5, 2014 na 9:08 Abụ • zaghachi
Biko gaa na akaụntụ na e nwere ihe karịrị 3X dị ka ọtụtụ ndị ọcha dị ka e nwere nke African ụmụ bi ná mba a.
Nke a na-enye a mmebi nke ruru nke killings dabeere na olee otú ọtụtụ n'ime onye ọ bụla mba na-ebi ebe a.
MichellH • December 4, 2014 na 10:53 Abụ • zaghachi
njem, nke a bụ ụzọ dozie ihe iseokwu, na-ekwu okwu, na-ekwupụta mmetụta, asaghe elu na-ekpe ekpere! bụghị kpọrọ…Daalụ!
M a n'etiti agadi ọcha nwaanyị. M nwere a dị nnọọ iche n'ọnọdụ. M na-amaja dị ka a na-eto eto na-acha ọcha na nwanyị (mgbe nile na iyi egwu mmekọahụ) , na ahụhụ ịkpa ókè n'ụzọ ndị ọzọ. Ka ihe atụ a na-gafere elu maka ọrụ n'ihi ibu ibu bụ ezie na m bụ ndị kasị ruo eruo. ma, Ọ dịghị mgbe m ka ọ na-esi m na-ala n'ihi na naanị otu onye m nwere ime bụ CHINEKE, na nke ahụ bụ ihe m na-agbalị ịkụziri ndị na-eto eto eto na m onwe m gburugburu. Anyị na-niile okosobode ikpa oke, ALL nke anyị, n'ụzọ ụfọdụ ma ọ bụ ọzọ. Ma ihe na-eto eto na nwa ikom na-eche ihu endangers ndụ ha, M na-eche na nke ahụ bụ mgbe ọtụtụ ndị na-agbalị iji nweta gafee.
Twiceborn • December 4, 2014 na 10:54 Abụ • zaghachi
Nkeji tupu m hụrụ gị tweet m gwa on FB
“Mgbe ụfọdụ, m pịgharịa m TL & n'ezie ikpe ekpere.
Adịghị m nsogbu na unchurched ma ụfọdụ Ndị Kraịst bụ otú Inconsiderately Nonempathic #ButGod”
Ị na-na na nri Nwanna Njem.. Ya mwute na m na-mwute..
M Na chọrọ na-arụrịta ụka ma ọ bụ na-arụ ụka.. M na-dị nnọọ na-ekpe ekpere maka udo na ikpe ziri ezi mmadụ.. #CrazyWorld
JR • December 4, 2014 na 11:04 Abụ • zaghachi
njem, M nnọọ mwute n'ihi na gị onwe onye mgbu nakwa n'ihi na ibu ihe mgbu ahụ nile African American / Black obodo ga-enwe mmetụta na ìhè nke-asọ oyi pụta ụnyaahụ.
Dị ka a na-acha ọcha Christian, M ga-amasị sonyere gị oku ka ikpe ziri ezi dum dị ka onwe unu. Na m ga-ekwu na dị ka m na-ele na video nke Eric Garner-egbu ọnwa gara aga, n'ihi na dị nnọọ ole na ole nkeji, M nwere ike-edebe onwe m na akpụkpọ ụkwụ ya ma na-eche na-ezighị ezi.
Dị ka a Christian onye ọrụ n'ime ebe nke na-amụba okpukpe iro, Echere m na ọ dị mkpa ka anyị nile na-na-aghọta na ọ bụrụ na ìgwè anyị na-aghọ a iche maka mmebi iwu uwe ojii, anyị ga-achọta onwe anyị a yiri ọrụ, oke. Nke dị ihe ọzọ mere anyị ga-pịa maka ikpe ziri ezi.
Anyị ga-pịa maka hà na eleghị niile – mmadụ ùgwù. Anyị ga anabata na mbụ. Mbụ anyị na ụmụnna anyị na ụmụnna nwanyị na African American / Black obodo, ma n'ihi na anyị na otu dị ka a dum. Anyị nwere ike ịda na a n'ala ọchịchị aka ike. Ka anyị niile na-amụta ọtụtụ ihe n'ihe ahụ merenụ nke Eric Garner si egbu ọchụ na. Daalụ.
Ben • December 4, 2014 na 11:14 Abụ • zaghachi
The ihe na m n'anya ọtụtụ banyere nke a song bụ na ọ na-amanye m ka m na-eche na nke a n'ụzọ na-mere okwu mere abụghị. Ekele gị nke ukwuu maka ihe n'eziokwu n'inwe mmehie na obi m dị ka nke ọma dị ka mgbapụta nke a oké nzọputa.
Ikpe ekpere na m aka m ọnụ.
Pamela • December 4, 2014 na 11:21 Abụ • zaghachi
Daalụ maka gị okwu, njem. M na-enwe mmasị ị ka a nwoke, a nwa amaala, na a kwere ekwe. Okwu gị mgbe metụrụ m mkpụrụ obi ma mee ka m na-eche. Ekpere anyị niile. ịhụnanya dị ukwuu.
RyanH • December 4, 2014 na 11:35 Abụ • zaghachi
Bụ echiche ezi? Ga-enwe a echiche ma ọ bụrụ na ọ dịghị ihe na-akwado stereotyping? Anyị niile maara lyrics nke kasị RAP songs ụbọchị ndị a. Ya guzozie si hell, na-akpata ndị na-ege na-ebi ndụ dị ka hell. Ọ bụrụ na ị na-ahụ a na omenala nke ndị mmadụ na-ege ntị songs banyere cop okowot, ọgwụ ọjọọ eme ihe, igbu ọchụ, na-ezu ohi, ime ihe ike, enweghị nsọpụrụ, ya mfe ịghọta na ha nwere ike a elu ọchịchọ ime ndị mpụ na ha na-ege ntị. Ọ bụ n'ebe ahụ mgbakọ na mwepụ na-egosi na-akwado ndị dị otú ahụ na-ekwu? Ee. Ike na onye ọ bụla na-agba àmà rụrụ omume si a Setan na RAP omenala na obodo ọ bụla,? Ee. Bụ ka ọtụtụ ná ndị a na omenala nwa? Ee. WTF ihe mere ndị echiche…Ọ bụ na ha na nwa? No, ma ọ bụla na ụcha akpụkpọ, ma predominately nwa. Ya mere ya a na omenala nke ebe a na BỤGHỊ A agbụrụ nke, na ya dị nnọọ ka na-eme na omenala na anyị na-ekwu okwu banyere bụ pụtara ìhè nwa. Ị n'ezie na-atụ anya ka ndị mmadụ na-echiche, mgbe eziokwu nke okwu ahụ bụ na a ọtụtụ nke ikpe (ọ bụghị ihe niile) ya nri? Gwa na na mmiri na Afghanistan onye na-ahụ ihe anya dị ka otu ihe ahụ Ihọd onye gburu ya kasị mma nwa osisi na izu tupu. Ị na-agwa ya ka ọ kwụsị stereotyping. Ya bụghị ịkpa ókè agbụrụ, ya onye-iro nke Chineke anyị bụ onye abiara odachi ọgbọ a nke ojii site hip-iwuli elu na media. Ịlụso ha ọgụ nsọ.
Thebiggerpicture • December 4, 2014 na 1:01 pm • zaghachi
Nke ahụ bụ ihe m na-ekwu kwa! Ekwela ka e stereo-na ụdị na akpa ebe. Ha na-na e nwere ihe kpatara ya!
RyanH • December 4, 2014 na 5:45 pm • zaghachi
Anyị kwesịrị ikweta na e nwere nsogbu ebe a. Anyị kwesịrị ikweta na a hip-iwuli elu omenala (mgbe m na-ekwu na, M pụtara ego RAP na niile bụ banyere ibi ndụ ọjọọ) ka kpara anyị obodo. Anyị kwesịrị ịkwụsị ụta “ịkpa ókè agbụrụ” dị ka ihe na-akpata ndị a dị oké incidences. Nke bụ eziokwu bụ na a akụkụ buru ibu nke nwa obodo e mmetụta na-ezighị ezi site music. Ya abụghị naanị na nwa obodo, ya ụwa dum, ma n'ihi na ọtụtụ n'ime ndị a rappers bụ nwa, ojii mfe mata onwe ha na ha.
Dị ka ndị Kraịst, anyị kwesịrị ịbụ ndị na-akpali ndị ụwa gbara anyị gburugburu, maka ihi ụwa. Ụwa ga-ahụ na olileanya nke ebube na anyị. Nke a bụ nanị ụzọ anyị ga-eme ka a dị iche na nke ụwa a ịṅagharị onye ọjọọ.
Props ka ị njem Lee maka akpali nwa obodo na ọtụtụ ndị ọzọ n'ụzọ na-eduga ná ezi ndụ. Ka anyị ghara ida a ịhụnanya maka ụwa na-arụgide anyị ga-atọgbọ ndụ anyị n'ihi ha.
Dị nnọọ ọzọ ọcha girl • December 4, 2014 na 11:47 Abụ • zaghachi
mara mma mmetụta, mara mma…ọ masịrị m! Kwusaa ya wee cheta nnwere onwe na-ekwu okwu ma na ndị dị otú ahụ, n'anya gị gafere, nile n'anya 116 pịa music, eche na ihe mgbu nke ya'll, yep m na-eme. Akananam ndụ dị ka gị, ịnọ na-ịda ogbenye yeah, kpagburu dị ka a Christian yea, segregated na a ọgaranya ụlọ akwụkwọ e, wakpoo dị ka a na-acha ọcha na ihe niile black obi n-apụnara na a loaded egbe e, wakpoo na obodo ụgbọ ala site ojii e, enwe PTSD a awakpo yea, aṅụrụma were m bụ nwata, n'ụzọ were m ọcha na smokin ahihia na nne na nna m bụ na anyị àgwà oge e, ịgbachitere mama m-ọkpụkpọ 911! Nne imi mebiri, papa na-etinye na ịkpagbu, ise yr nwa agbọghọ na iti mkpu Kwụsịnụ! ọbara ofụri, Mmụọ ọjọọ na ala, M a nnukwu girl now. Doputa m, ee O mere! Site ugwuuhiri na apịtị! Site mmekọahụ, ọgwụ ọjọọ eme ihe, ọnwụ, aghụghọ, ọdịda, Ọ zọpụtara m, maka ihe ka mma. Anyị niile na-eche ihe mgbu, ka-alụ ọgụ maka otu thang! Anyị niile nwere a na-agba akaebe, ma ọ bụ rascism sarcasm sexism(crae),aṅụrụma, riri, nsogbu, traumatic emegiderịta, ma ikwusa eziokwu na ịhụnanya nwanna nwoke na-Christ! Gịnị ka anyị pụrụ ime? Na-eme ihe ị na-eme! Ịhụnanya m hụrụ gị n'anya! ma ụzọ, Kraịst na-ebili! N'anya ịhụnanya ịhụnanya na Jehova!
Onyi • December 4, 2014 na 11:50 Abụ • zaghachi
n'anya otú ezigbo na nke a bụ
Bill • December 4, 2014 na 12:08 pm • zaghachi
njem nwanne, M zutere ị na Cedarville a di na nwunye izu gara aga, na mgbe hụrụ n'anya ma na-akwalite gị music. Okwu gị na-eme nkwusa dị ukwuu! Ma m olileanya na unu ga-atụle n'akụkụ nke ọzọ nke mkpụrụ ego. Mgbe ị na-ekwu na 'Ọ coulda kemgbe ị'…ị mkpa ịghọta otú ahụ ọ gaara m, na m ochie na-acha ọcha nwoke na-ekwusa. Na-eje ije ala n'okporo ámá nke obodo ukwu ma ọ bụ ime ime obodo, anyị niile nwere ike bụrụ ndị ajọ mbunobi na ịkpọasị…nanị n'ihi na nke agba akpụkpọ ahụ anyị…n'agbanyeghị anyị agwa ma ọ bụ ihe anyị na-eme n'oge. Ọ bụ a ọchịchịrị eziokwu nke ọdịda na mmehie.
Ma na aka nke ọzọ….ọ 'ga-adịghị’ ndidi ị onye e jidere ma gbuo na n'okporo ámá ', n'ihi na ị ga-meghachi omume mara ka a Christian, na dị ka mmadụ na-asọpụrụ ma na-erube isi ọchịchị na Chineke họpụtara, dị ka Pọl onyeozi mere. Ọ bụrụ na ị na-atụle ọnọdụ nke ọ bụla n'ime ndị ikom ndị a ị na-e kwuru okwu, o doro anya na ha mere a nhọrọ iguzogide, enupụ isi, agha ma ọ bụ ọgụ Leo onye na-eme na ọrụ ha na ha na-ebubo na-eme obi. Ma mgbe onyeisi nwere ike ịbụ na ikpe mara nke echiche ọjọọ, ịkpọasị ma ọ bụ ịkpọasị, ma ọ bụrụ na aja ama ebere ye iwu, ha ka ga-adị ndụ ma enwe ike ịchụso ihe ọ bụla na-ezighị ezi megide ha n'ụlọikpe. All nke anyị bụ isiokwu na-ezighị ezi….na otú anyị na-eme ya….mgbe na-ekpebi ihe ga-esi….dị ka o mere na nke ọ bụla n'ime ndị a dị oké ikpe.
Daalụ maka ewere nke a, na biko chere free ka ha gbazie m ma ọ bụrụ na m nwere ya na-ezighị ezi, ma ọ bụ ọ bụrụ na m na ndụmọdụ bụ unbiblical ma ọ bụ ihe megidere ozizi nke Jizọs n'onwe Ya. Chineke na-agọzi gị nwanne m nwoke, na ka ọrụ ọnụ na-agwọ ọrịa….bụghị nkerisi.
Stephanie • December 4, 2014 na 1:30 pm • zaghachi
Ndụ bụ nnọọ ihe dị oké ọnụ ahịa. Ọ-ewute m ịhụ otú ndụ nke ndị na anyị obodo na-adịghị na ẹkenịmde ke otu banyere dị ka agbụrụ ọzọ. Ọ dịghị onye kwesiri ka a gunned ala ma ọ bụ kpagbuo ha ọnwụ. Ezumike na-emesi ndị na-eche ụdị omume ga-eleghara anya site Chineke ị na-ehie ụzọ. Ọ bụrụ na nwoke agaghị eguzo maka ihe ziri ezi ọ ga-aza Onye Kasị Elu. njem Lee….mgbu gị / mwute anyị bụ ezigbo enweghị a doro anya. Ma Jehova ga-anụ anyị na ikwu dị. Anyị dị nwere iguzosi ike na Ya, ma na-erubere ime ihe O na-ekwu. M ekpe ekpere na dị ka a ndị mmadụ na anyị ga-abịa ọnụ na Jizọs aha amamihe, ike na ume maka nti mgbanwe.
Jacob • December 4, 2014 na 2:01 pm • zaghachi
Ị na na na onye mmụọ nsọ na m ebe m na-na na ụzọ gee ntị ị. Ma mgbe m na-adịkarị gị n'anya songs, a otu m mere ka m mwute karịa ihe ọ bụla, ma ọ bụghị nanị n'ihi na nke ọdachi ọnwụ ahụ mere. Ọ bụ unbelievable na-atụgharị na tv ma ọ bụ na-agụ na ozi ọma na-ahụ ihe niile na anyị nwere ike ime ihe ọjọọ dị n'ụwa a. Amaghị m ihe ọ bụla banyere ndị kwuru banyere ikpe wezụga ihe mgbasa ozi na-agwa m, ezie na m ga-asị na m nwere ụfọdụ echiche onye ọ bụla. Gịnị bụ ihe kasị egbu mgbu m bụ eziokwu na ọ dịghị onye na-ahụkarị na ije nke ebumnobi si achọ eziokwu na guzosie ike ikpe ziri ezi, na-atụgharị na-na alienating ndị ọzọ, Enyere ọcha gbara akpụkpọ ndị mmadụ na cops. The ụzọ m na-ahụ ya, naanị ihe na-akwalite ịkpa ókè agbụrụ na-ndị na-ada na a n'elu ikpo okwu mbụ na-enye ha agbụrụ na ha iwe. Na mbụ, M na-aga ka biputere a ụyọkọ nke njikọ akụkọ m na-na na na-adịbeghị anya na-agụ banyere jọgburu igbu ọchụ na emeela ebe na-adịbeghị anya nke na-acha ọcha gbara akpụkpọ ndị mmadụ site n'aka nke nwa gbara akpụkpọ ndị mmadụ, ọ bụghị n'ihi na m chọrọ ikwu na nwa gbara akpụkpọ ndị jogburu onwe ma ọ bụ ihe na-erughị ọcha gbara akpụkpọ ndị mmadụ, ma na-ekwu na onye ọ bụla a na-ata ahụhụ na ihe niile na-emegbu. Olee otú ọtụtụ ndị na-acha ọcha gbara akpụkpọ ndị mmadụ nwere ị jụrụ banyere sketchy ọsọ ins na cops? M ekwe nkwa na ị na ha na nwere ha, cops na-emehie. Im anaghị agbalị iweghara a n'akụkụ ebe a, m na-ekwu bụ na naanị ndị na-ịkpa ókè agbụrụ ndụ na-adịghị ndị e weere na-eme ihe si na-akpọ asị megide ndị agbụrụ ọzọ, ọ bụ ihe na-eme nke onwe-akpali ịkpọasị, ikpe ziri ezi bụ nke Jehova. Ma mgbe a dum ma ọ bụ ìgwè-anọgide na-kwere na akpụkpọ ha na-eme ka ha ọ bụla dị iche iche site n'aka ndị ọzọ. Ndị kweere akpụkpọ ha na-enye ohere ka ha mee ihe ma ọ bụ na-akpa àgwà na-achịkwa nke ndị ọzọ ma ọ bụ na-enye ha pụrụ iche na ikike na-iwe. The agbụrụ abụghị mpụ. Na akpụkpọ ahụ anyị abụghị ndị anyị bụ, ma anyị toro Africa ma ọ bụ Mexico, akpụkpọ ahụ anyị ink bụghị omenala ma ọ bụ ihe nketa. Achọghị m ka m mara gị dị ka Njem Lee nwa nwoke, na m na-achọghị ka a mara dị ka Jacob nwa nwoke, ma ọ bụ Jekọb ndị ọcha. M Jacob, ị Njem. Anyị na-na na-enwe ọganihu nke a na-eto eto ike site na-ekweta na ọ bụ ọbụna e. Ma ọ dịghị ike. All ụmụnna. All ndị nwanyị. All ụmụ nke Jehova. M mwute ị na-emejọ nwoke, ekele maka ihe niile ị na na na sitere n'ike mmụọ nsọ na ndụ m!
Burton • December 4, 2014 na 4:13 pm • zaghachi
Ihe ọ bụla ma eziokwu nwanne, ọ bụ ezie na m na-acha ọcha, M chọrọ banye na akpati ozu na ya'll, na wute mgbe ị na-eru uju. M na a na-eso gị n'ihi na a ogologo oge na a track bụ definately otu n'ime m ọkacha mmasị! N'anya ihe ị na-eme ka anyị site n'aka Onyenwe anyị Njem, jide ka iji.
Dayo • December 4, 2014 na 4:25 pm • zaghachi
Coulda kemgbe onye ọ bụla… Njem Lee * ịmeela *
Shelby • December 4, 2014 na 4:35 pm • zaghachi
hey njem, ekele maka-ekere òkè gị obi. Mgbe m na-a-eto eto na nwa nwoke, na m nwere ike ọ gaghị n'ezie mgbe ịghọta, M na-afụ ụfụ gị. Daalụ maka eweta ihe n'ókè na ndị ọjọọ na ndị uwe ojii na-eme ka o siere ha ike 90% nke ezi ọrụ na m hụrụ n'anya na-ekwu na anyị niile uru n'otu ke mbiet Abasi na nke ahụ bụ ebe olileanya anyị kwesịrị. Grace na Peace Nwanna.
TBrant • December 4, 2014 na 4:38 pm • zaghachi
M na-eche na ị na na lyrics nwoke. O wutere m na a emewo gị n'oge gara aga na m na-emejọ na ị dị ka na ihe niile ndị a n'ahụhụ na ime ihe ike a. Ibi ịhụnanya na-eje ije na ndị ọzọ, pụtara-ewute ha na ha na-akwa ákwá na ha, bụ ihe anyị na-akpọ na-eme na ndị na-ata ahụhụ. M na-arịọ maka ekpere dị ka m na ugbu a na-agbaso mgba ihe on a onye ozo ma m ga-echebekwa gị na ndị mmadụ aka na nke a na-ekpe ekpere dị ka nke ọma. Gị n'anya Bro. Nwere ike mgbe izute gị ma m gị n'anya.
Andrew • December 4, 2014 na 4:43 pm • zaghachi
Aghọtaghị m ihe a #couldabeenme. Njem m a na-akwado maka oge ụfọdụ ka ọ bụghị nanị ihe ndị ọzọ Christian rappers na ugbu a kwuru banyere ihe mere na Ferguson, Otú ọ dị m nkụda mmụọ na-adịbeghị anya na iti mkpu Ferguson.
M na-aga na-n'ihu m a 25 afọ-acha ọcha nwoke. M na-adịghị aghọta ihe ọ bụ dị ka na-a nta ke United States. M na-eche dị ka m mgbe e wetara n'elu n'ihi na nke m mba. M mgbe e patted ala n'ihi na nke m mba. M mgbe e nwere azụ n'ihi na nke m mba. Ndị a bụ ihe na m cant-asị na m na-aghọta.
Ezie na anyị na-ekwu okwu banyere ihe ndị m pụọ ịghọta ahapụ ikwu banyere #couldabeenme mkpado. n'ezie?!? Ọ gaara ị?!? Ị ga-zuru sịga si a adaba ụlọ ahịa na mgbe adịghị ege ntị a cop? Ị ga-emegide njide? Ị gaara kụrụ ma ọ bụ ahụ imerụ onye uwe ojii nọ edo?!?
Biko gwa m ihe mere na ị ga-eme ihe ndị ahụ!
Ị na-ahụ mgbe m na-aghọta na m ga-amaghị ihe ọ bụ dị ka na-a nta ke US m biri esenidụt. M bi na Europe maka 8 afọ. Mgbe anọkọ na Europe m chọpụtara na mba ọ bụla nwere a dị iche iche na omenala. otu n'ime ihe ezinụlọ m chọtara bụ akpali nnọọ mmasị e mgbe ọ bụla anyị na-ezute a black onye Europe ha si UK. Onye ọ bụla n'ime ha kwuru kwesịrị ekwesị English na ndị nnọọ nsọpụrụ na ọma uwe. Ọ dịghị onye n'ime ha na-eyi ha ogologo ọkpa gburugburu ha ikpere.
Ị na-ahụ na e nwere a dị iche iche omenala ebe ọ bụ adịghị anakwere n'ihi na ha na-eto eto na-eme ihe dị ka Nelly. Ebe a na US na e nwere eri ego nke omenala ebe ọ bụ nkịtị, ọbụna elu-eme dị ka a agboro. Gịnị mere o ji bụrụ na???
Gịnị ka ihe niile a nwere na-eme na Ferguson?? Ọfọn na onye ọ bụla na-akpọ nke a Michael Brown eyen a ọma eyen. M pụtara na ọ na-aga na-na mahadum! Ọfọn ebe mgbe a na-aga na mahadum hà ịbụ ezigbo nwa ewu? Ahapụ anya na eziokwu na ọ bụghị ezigbo nwa ewu. Ọ bụ onye ohi na a nsogbu onye. Na njedebe, ọ na-ege ntị na ikike na a-emecha-eduga n'ọnwụ ya.
Ihe m na-adịghị aghọta Njem bụ na n'ihi na nke a na-eme, n'ihi na “couldabeenme” ị gaara aka ime ihe ndị a kwa. Ị ga-ama na-ezu ohi site na a ahịa na mgbe agha na cop na kwụsịrị ị e mesịa.
N'ikpeazụ, ihe mere dị mwute! Otú ọ dị ya nwere ike ịbụ na ị na. Ọ apụghị ịbụ m. Nke ahụ abụghị n'ihi na m a 25 afọ nwoke. Ọ bụ n'ihi na m ga-ezu ohi na m ga na-alụ ọgụ a cop. Ndị bụ okwu ebe a. Ọ bụghị agbụrụ.
kori • December 4, 2014 na 4:46 pm • zaghachi
Michael • December 4, 2014 na 4:48 pm • zaghachi
Grace, udo, n'anya ma na ebere Chineke anyị na Daddy
mbụ, M ga-amasị na-eto Jehova maka nzọpụta gị na ohu hundu nwanne. Ị na-anọchi anya na Nna. M gọziri agọzi na-ekwu na ị na-akpa artist na Chineke ji budata mmetụta m ije n'isi nzọpụta m. Malitere zọpụta na December nke 2006 na m na-ukwuu na-agbakwunyere na Hip Hop / Urban omenala na ọ bụ ike aga nnọọ na-ege ntị dịkọrọ ndụ ofufe, “Na Na Na Music”. Na-ekele gị ajụjụ ọnụ na ndụmọdụ banyere omenala mmata dị ka ọ na metụtara Bible ofufe na otú ọ dịgasị.
Ka Jehova gọzie gị na-amụba mkpụrụ nke ị oru!
Pastor Bill, amara na udo gị dị ka nke ọma…ezie na m ekwekọrịta n'ụzọ zuru ezu banyere n'iguzogide njide m ike kwere na e nwere ụkpụrụ na a ga-kwadoro na akwanye maka na-ezighị ezi usoro / omume.
Michael • December 4, 2014 na 4:50 pm • zaghachi
Kpamkpam chefuru na-atụgharị uche song. My hụrụ n'anya nwanne m kwere nke a song ya gụnyere ihe ezi hip iwuli elu bụ na ihe e mere ya na-…
Zander • December 4, 2014 na 6:10 pm • zaghachi
Me onwe m anaghị ekweta na a song. Ọ na-egosi ịkpa ókè agbụrụ na bụ n'ezie na america. Onye ọ bụla ọdọhọde na ndị ọcha bụ akpa ókè agbụrụ nanị n'ihi na ha mere e ọrụ. Ọ bụrụ na ọ bụ a nwa nwoke ndị gbara nwa ewu (onye ruru n'ihi na ndị ọrụ nche egbe) ogbugba ya ihe ọ bụla ga-nke e kwuru bula. Dị nnọọ uche m na-eme ka na-akpọ asị :)
Jason • December 4, 2014 na 6:24 pm • zaghachi
M na-ekele gị njikere nwere mkparịta dị egwu. Anyị nwere nsogbu na mba na mkpa ka ọnwụ na niile na n'akụkụ na nanị ụzọ ime nke na-esi n'aka Kraịst Jizọs!
Mkpa ka anyị gosi na onye ọ bụla na ịhụnanya nke Kraịst – otú ahụ ka m na-etinye ọnụ a nta mma video nke ịhụnanya… https://m.youtube.com/watch?v=7oPOZppRZRk
Whitney • December 4, 2014 na 6:26 pm • zaghachi
Nke a bụ kpọmkwem otú m na-eche! Nke a bụ a mara mma ma dị ọcha okwu. Ikpe ekpere na-na n'ihi na ị Bro! M hụrụ gị n'anya ma na-ekele niile nke gị ozi.
Ben • December 4, 2014 na 7:15 pm • zaghachi
Njem dị nnọọ chọrọ ka ị mara m na-emejọ gị na-adị anyịgbu ịbụ akụkụ nke ihe ngwọta. M a na-eto eto director na a suburban ụka na-akasị na-acha ọcha na na, M nọrọ m Wednesday n'abalị ọmụmụ ha n'abalị ikpeazụ mmiri n'ime Gods okwu enyere ha ịghọta ihe mere e merụrụ na abụọ, otú dị ka ndị kwere ekwe na anyị na-ekwe ka ịhụnanya cover niile na-ekwe ka ìhè nke Kraịst na-enwu, otú anyị na-ákwá na ndị na-akwa ákwá ma na-aṅụrị ọṅụ na ndị na-aṅụrị ọṅụ. Mgbe ahụ nọrọ n'abalị @ a merenụ na-akpọ Faith Rx nke ị nwere ike ịbụ na ị maara na, inye ihe na-otu ozi na ndị okenye. M maara n'ụzọ na-agwọ ọrịa bụ ogologo maka ndị nile so na ga na-mere ezigbo mgbe anyị na-eche anyị anya na Eze ahụ na-adị ndụ dị ka Kraịst. M nnọọ mwute n'ihi na ihe mgbu na abụọ na chọrọ ka ị mara m na ga-anọgide na-ekpe ekpere maka obi mgbanwe n'etiti ndị na kpuru ìsì. Nọgidenụ na-isi elu, Chineke kwesịrị ntụkwasị obi na ezi, na ị na-anọgide na-eme ihe Chineke gọzie gị na, unu na-eme ka a dị iche.
Osakpolo • December 4, 2014 na 7:43 pm • zaghachi
Ekele gị nke ukwuu maka nke a song n'ihi na nke a echiche nwekwara e-aga site na uche m. dị ka a 21 afọ nwa nwoke Boston m ịghọta na m nwere ike na anya aka Kraịst ndị ikom dị ka ị na-.
angelique • December 4, 2014 na 7:54 pm • zaghachi
Nwere ike na na na onye nke m 4 umu! Daalụ njem. M ekpe ekpere ka ndị mmadụ ga-akwụsị na-agbalị imeri n'arụmụka na n'ezie na-anụ obi anyị ikom.
GageGuest • December 4, 2014 na 8:24 pm • zaghachi
teip lee obi m ewute nwekwara mgbe na-ekiri ihe ọhụrụ video nke nwoke gettin chocked ọnwụ.
M na-ezighi ezi ikpe unu na-ekwu okwu ruo. M anya na ya nke a okpukpe mmadụ ele kama a enyere n'iwu ka ha hụ ibe. M mwute na m ụmụnna ndị nọ na Jesus m ekpe ikpe ezighi ezi.
M maara na m na-zuru okè na m mkpa Gods n'anya everyday. Ọ nọwo keugwu m. Ọ hapụrụ ndụ m taa si a egwu nchegbu agha. Echere m na m na-aga ịnwụ ma o kweghị ka ya.
M na-aga kewapụ onwe m si m niile na-elekọta mmadụ media (ihichapụ ha) na-eru nso na-eje ije na Jizọs na Mmụọ Nsọ na na Eziokwu!
Ọ bụrụ na ị na mgbe chọrọ ikwu ma ọ bụ ihe ọ bụla nye ndụmọdụ m nọmba bụ 580-509-5059
Mauricio Arriaga • December 4, 2014 na 10:45 pm • zaghachi
Ị pụrụ ikpe ekpere maka m dị egwu m ga-aghọta nnọọ na ọ na-adị m Iike m mkpa karịa nke chi n'ihi na m na-adịghị ezu nke ya na m na a 13 afọ nwata si Kerman California na unu bụ m nlereanya m a Kraịst ma m nọgidere na-aga azụ mmehie na ike gwụrụ m nke na-agba ọsọ n'ime mmehie m chọrọ ịgbanwe ndụ m na m chọrọ ịbụ ihe e kere ọhụrụ nwere ike ị kpee ekpere na Chineke adịghị arụ ọrụ na m otú m nwere ike ịbụ a mma Kraịst <3 it coulda been me who got shot we never know when we gonna die we never know when god is gonna call our name and say its time for you to go that's why we should always be ready we need to say every night and every time you go out god if I don't want up or I don't come back home pleaz accept me into your throne of glory and eternal life <3
Denzel Patricks Ny Obere. • December 5, 2014 na 12:06 Abụ • zaghachi
M ntị na song ma lyrics dị nnọọ kwuru ya niile na m na ọ bụ a mma song akpata nke ahụ bụ ihe ị na-eme ihe kasị mma. Chineke na-agọzi gị ọzọ
NicholasTracy • December 5, 2014 na 1:30 Abụ • zaghachi
Na mbụ, mgbe m hụrụ ndị a posts, M ga-esi na ọ. M mara mma nke ukwuu dị chere na ọ bụ manụ, na m adịghị oke mpako nke na ugbu a. Mgbe na-ege ntị nke a song na Derek Minor na-adịbeghị anya ntọhapụ, M na-eti na amara bụ nnukwu akụkụ nke a, na akụkụ m efu efu kasị. M na-ewepụta oge na-eche banyere ya si dị iche iche echiche. Dị ka a n'etiti-klas ọcha Ihọd ịga a mahadum, M nwere oge siri ike nghọta na anyị na-ele anya na dị iche iche ndị ọzọ na, m na gị. Otú ọ dị, ozugbo m wepụtara oge na-eme otú, m saghe anya ka a dị iche iche ebe ka ebe m na ná ndụ m nile. Achọrọ m ji ezi obi na-arịọ mgbaghara maka bụghị ewere na oge ịhụ ihe si gị n'ọnọdụ, na m chọrọ ịgba onye ọ bụla ịgakwuru niile a na amara n'uche. Ọ bụ isi. M na-ekele gị maka ikenye a song, Derek Minor maka atọhapụ ya, na ihe nile nke 11Six arụ ọrụ bụ ndị gwara banyere nke a nke na-akọrọ ha amamihe.
Kentrel • December 5, 2014 na 1:58 Abụ • zaghachi
Njem Lee ịhụnanya dị ukwuu na a song nwoke ọ dịghị okwu ụgha. Anyị mkpa ụdị song sere anyị isi nke na gọta, ma lee ihe Chineke chọrọ ka anyị mee. M na na na m ozi na-eme a song dị ka nwoke a. Ka Chineke nyere anyị niile na nke a ike oge.
Edward • December 5, 2014 na 8:11 Abụ • zaghachi
M a pastọ nke a na chọọchị dị na a obere obodo dị na Arkansas na m adịghị ina ndị uwe ojii kwụsịrị n'ihi na ọ dịghị ihe doro anya kpatara……..ọzọ. Na ọ bụghị mgbe niile a na ikpe. Mụ na nwanne m kwụsịrị na gwara pụọ ​​nke ụgbọ ala na amụ na ihe niile anyị mere bụ mbanye n'ime obodo dị n'ebe ugwu Wisconsin. anyị bụ ndị na 19 ma ọ bụ 20 afọ. Afọ ise gara aga anyị na-eje ije n'ụlọ na a ụgbọala ndị uwe ojii ji nwayọọ nwayọọ na trailed anyị atọ blocks ma ọ bụ ya mere, tupu nkwụsị anyị. Ha kwuru na anyị na-ele anya dị ka ụfọdụ na-enyo enyo na a ohi.
M kwuru ya anaghị eme eme ọzọ n'ụzọ zuru ezu kwere na ọ ka nwere ike nakwa na ihe nwere ike ngwa ngwa gaa nnọọ ihe ọjọọ na.
Ka m mata banyere Christian Hip Hop site KAA na m na-ege okwu gị songs niile nke oge. “ebili” bụ oyi, oyi na-atụ, oyi na-atụ.
Okwu gị na-ekwu eziokwu banyere Kraịst ji obi ike na 116.
M na-ekele a ji obi ike na nkwupụta nke anya ke akamba picture na anaghị ikewapụ na-elekwasị anya na otu ihe mere.
Mgbe i kwuru ọ bụla nwa nwoke ị maara a merela…Abụ m otu n'ime ha.
Iru eru ka m oge obula.
Ịnọgide na-ekwusa nwanne.
OtiatoMargy • December 5, 2014 na 10:06 Abụ • zaghachi
Gịnị a na enyi anyị nwere na Jizọs; ALL mmehie anyị ma griefs iburu, niile n'ihi na anyị enweghị na-ebu ihe niile Chineke n'ekpere.. O siri ike ma Chineke bụ ike intercept ma ọ bụrụ na anyị na-ejere anyị enweghị enyemaka kpamkpam Ya amara na ihe karịrị ezu. Anyị nwere ike ịjụ ọtụtụ ajụjụ, ajụjụ anyị amata na wdg, ma na-atụ uche azịza nile Chineke na-ama na-nyere na Okwu ya ma ọ bụrụ na naanị na anyị chọọ n'Akwụkwọ Nsọ. Ọ bụrụ na anyị na mgbe ọ dị mkpa Chineke, ọ bụ UGBU A na okwukwe bu, dị ka anyị na-aghọta na usoro anyị na-atụkwasị obi na-echebe anyị ida. Chineke bụ ebe mgbaba anyị na ike a nnọọ ugbu enyemaka n'oge mkpa… Olileanya anyị bụ na Jehova, bú Chineke nke Bible site na Jizọs Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta na Onye-isi nke udo, ọ bụ maka ihe ndị a O weere anyị ka anwụ n'ihi ya anyị na-na-anabata n'ebe a hụrụ n'anya na a ga-free n'agbanyeghị anyị di iche iche. Anyị na-eche maka ọzọ merenụ-apụghị izere ezere na a na ọnụego, ka ha laghachikwute Chineke, anyị ịhụnanya mbụ. Anyị hapụrụ Ya ma Ọ dịghị mgbe hapụrụ anyị. Ọ na-echere, ịgwọ anyị ọnyá na-eji ejiji anyị na eze ka anyị ndị dị ùgwù dị ka ụmụ Ya bụghị ihere dị ka ndị ohu na-enweghị ikike. Chineke bụ Nna anyị, anyị bụ nke Ya, Ọ bụ a-ahụ papa m anyị mkpa Ya! O nwere ihe niile anyị chọrọ, gụnyere ụmụ ikike!
Sammychris68@gmail.com • December 5, 2014 na 10:10 Abụ • zaghachi
Ya abụghị naanị na american, ọ na-eme n'ebe nile gburugburu ụwa…M na-agba àmà ebe a nwanne nsure ibe ya na nwanne alife site petrol n'ihi na ọ bụ a Kraịst mgbe ọ bụ onye Alakụba, ebe 3 emeghị ihe ọjọọ na-amụrụ ebe set mụnyere maka mpụ iko ha na-adịghị na portharcourt Nigeria, ebe igbu onwe bombu na-ewe ebe, ebe agha gburu a dum nwa amaala na a obodo a na ndọrọ ndọrọ ọchịchị kpatara, Nigeria bụ otu n'ime mba na iju ihe nke na-eme bibble eme. Anyị kwesịrị Ua ekpere niile n'ụwa…Ibi Ndụ na Alakụba adịghị mfe.
MargureteMensa • December 5, 2014 na 2:31 pm • zaghachi
Whatev. Ebe a bụ a aro: quitcherb * tchin, na-eto eto ma na-eme ihe dị mma ka mmadụ nakwa gị onwe ha nanị mmetụta. Ha na-na ụzọ n'elu gosiri.
Marchauna • December 5, 2014 na 3:07 pm • zaghachi
Nwere ihe ùgwù nke na-anụ ị na WinterJam na Spokane, Washington na nnọọ gọzie gị music. Enyocha gị website taa na hụrụ gị post banyere Ferguson. Daalụ maka na-ekere òkè. Chineke naanị na nso nso meghere anya m na eziokwu nke ịkpa ókè agbụrụ na ịkpa ókè na US na Church. Ọ gbajisịala obi m, m na-agbalịkwa ịmụta ihe dị ukwuu ka m nwere ike otú ahụ ka m nwere ike a na Akwụkwọ Nsọ, -Ewetara Chineke otuto àgwà. Your post ruru m n'obi na-enye m ihe ịkọrọ ụmụnna bụ ndị obi na anya na e meghere ma. Ikpe ekpere maka ndị a Rev 7 Church na Mmụọ Nsọ na-ewetara nkwenye na ndị Ya na “ndị West”. Biko adịghị agwụ ma ọ bụ nye elu ma…Isi nke Kraịst kwesịrị ozi gị, ọhụụ, na ahuhu.
fundmc • December 5, 2014 na 3:17 pm • zaghachi
Hụrụ n'anya na-ezi ozi. Anyị nwere mee ka okwukwe anyị n'ime Onyenwe anyị ma na-echeta na-Good News na-agbalị ugboro.
L • December 6, 2014 na 11:33 Abụ • zaghachi
njem, Daalụ nke ukwuu. Daalụ maka n'anya ndị ọzọ mgbe ha na-na na asị na ị na. Daalụ maka inweta Christ obi n'ihi chọọchị ya – a n'otu n'otu – na-eje ije dị ka Ya, mgbe ọ bụ ike na mgbe ọ dị mfe. M na-asọpụrụ gị na ezinụlọ gị na ogbu na ị na-arahụ n'anya Jesus ọma. Daalụ.
Kathleen • December 7, 2014 na 3:11 Abụ • zaghachi
M nnọọ ngọngọ gafee nke a na wanna-ekwu na gị na omume bụ authentic, si obi na-adịghị. M na-agba àmà gị ewute ma na-enwe arọ gị. M nwere ike ikwu na ọtụtụ ihe na ya ruru ka m okike. Ka anyị hụ ụbọchị mgbe anyị nweta ndị mmadụ dabeere na ihe bụ n'ime na-ele anya maka ịma mma na enwere.
Margurete • December 7, 2014 na 12:27 pm • zaghachi
Ọ dị mma, otú ahụ ka m na-ahụ otú a na-aga. mbụ, Echere m niile posted comments ga-abụ na ihu ọma nke gị mwute sappy akwa nwa song ma ọ bụ na ha adịghị na-posted. Mgbe ahụ ọ na-egosi na ị ma ọ bụ onye gị na (mma) commenters ọkọkpọhi asusu na eziokwu na e nwere ọtụtụ puku mmadụ n'iyi kwa gburugburu ụwa si onye na mmadụ ime ihe ike ma otu n'elu ibu, asthmatic nwa mmadụ nwụrụ mgbe n'iguzogide njide, ọ na-eme ka jidere na igwefoto na ugbu a anyị sainted ya, egwuri mbuba kaadị, katọrọ niile uwe ojii mba dị ka gabiga ókè okopodudu kpọ a mba nsogbu. Nanị otu ajụjụ: ma ọ bụrụ na onye a rụrụ ọrụ dị nnọọ ka ike na-eme ka a dị ndụ maka onwe ya na ezinụlọ ya na a iwu, iwu kwadoro ma omenala ejiji kama rụrụ arụ na iwu akwadoghị ọrụ ka o nwere ike ka na-adị ndụ taa? Ọ dịkarịa ala, anyị ga na-adịrị gị sappy onwe ọmịiko.
WhiteVictim • December 8, 2014 na 4:05 pm • zaghachi
M a na-acha ọcha nwoke na-arụ ọrụ na-eto eto si dị iche iche agbụrụ na nzụlite. Ugbu a, 80% nke ìgwè bụ nwa na gị song iwe m. M zụrụ ọtụtụ akwụkwọ nke gị CD si na-enye gaa otu ma ọ dịghị ihe. Na tụgharịa n'akụkụ gị song “Ọ gaara m” bụ na ị na-ekwu n'ezie, “Ọ gaara unu” (ọcha) onye nwere ike mere nke a ka m (nwa nwoke). Ị na-WHITEwashing kpatara esemokwu n'obi nakwa na mmehie. Dị ka a Christian artist unu mara mma ma ị na-eme ihe ndị ọzọ na-eme: na ị na-capitalizing na ọnwụ nke ndị ọzọ na-ere gị music na-eme ka ego. Ị bụ ịmata dị iche iche si Al Sharpton. Biko gụọ akụkọ nke rape & okowot nke na-acha ọcha na nwunye Channon Christian, 21, na enyi nwoke Christopher Newsom, 23 n'aka nke ndị nọ na-oji. Nke a akụkọ mgbe mere n'akwụkwọ akụkọ n'ihi ajọ ọnwụ nke ndị ọcha adịghị ere akwụkwọ ma ọ bụ RAP songs. Ọ gaara gị ma ọ maa mere ha. Ya mere,, gịnị mere ị naghị abụ abụ banyere na. Olileanya, ị ga-ekwe ka nke a na-gwa na-anọgide posted.
Tom • December 8, 2014 na 10:54 pm • zaghachi
Chaị. Ọ ga-ajọ gị njọ na-a aja gị dum ndụ. Nhụsianya na-hụrụ ụlọ ọrụ, ezie na.
Your song fọrọ nke nta ka m emere onwe m atụle ọ bụla ajọ ihe mgbe e mere m,. Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti gị na m? M họọrọ ịmụta site n'oge gara aga, na-aga. Ma eleghị anya, m nọ na-ezighị ezi. Ma eleghị anya, m na-emejọ. Onye chọrọ ịma.
M ike karịa na.
p.s. M a na-acha ọcha nwoke, na mụ onwe m kwa nwere ese okwu na ndị mmanye iwu ka a n'afọ iri na ụma mgbe otu ugboro ebubo. M na-ekele Chineke maka onye ọ bụla n'ime ndị ọnọdụ na otú m mụtara na ha.
Thomas • December 10, 2014 na 11:38 pm • zaghachi
Njem Lee bụ otú ìhè-gbara akpụkpọ, ọ nwere ike gafee dị ka na-acha ọcha. Nwunye ya na ụmụaka na-na-acha ọcha na-achọ. Olee otú ọ pụrụ ekwu na ha n'ezie na-eji oji ma ọ bụ nwere otu ahụmahụ dị ka nwa ndị mmadụ.
Ee m ọcha na ọbụna na m maara na ndụ bụ ike maka ojii na ọchịchịrị akpụkpọ.
Bịa Onyenwe anyị Jizọs!
njem Lee • December 22, 2014 na 1:59 pm • zaghachi
Nke a comment bụ nsogbu na-egosi na otú obere ị ịghọta banyere ndụ maka oji ndị mmadụ na America
Lori • December 21, 2014 na 4:14 Abụ • zaghachi
taa, ebe a na-egbu abụọ NYPD ọrụ, M mechara chere na m ga chọọ video nke Eric Garner_I na-ele ya, M nwere ike na-eme na-ekiri ọ na otu; M nnọọ na ịkparị-kwere!! Anya mmiri na-eru….otú iberibe amaja na now, otú Dar ha !! M mere wutere maka Eric ezinụlọ, na enyi. M na-aghọta na ọ bụ n'ezie a na oké madu, a mara mma, enye mkpụrụ obi. Rip Eric Garner.
M a White nwanyi, na m n'oge 50, M na mgbe bi na obodo ndị dị ka ebe Eric mere. M ihe ùgwù ọlị; M na-arụ ọrụ ike, nwere siiri eme ọgwụgwụ zukoro; M na-ezighị ezi na-arụ ọrụ ebe; n'ezie ike emegbu, chụọ n'ọrụ, na ihe karịrị otu oge; M enweghị ikike, ọ dịghị onye na-eche banyere, na EEOC, bụ a crock of ….! Ná ndụ, M nwere a na-agba ọsọ na ọ bụ abụọ na a cocky uwe ojii; ma, M nwekwara ahụmahụ ọtụtụ ezi uwe ojii. Ọ dịghị mgbaghara mma maka omume megide Eric; O mebiri, na ihu ọma na gburu n'aka ndị a cocky uwe ojii. Apụghị m ịghọta odida anyị usoro ikpe ikpe; M nnọọ jijiji isi m, Amaghị m ihe na-eme; mgbe na-ekiri na ozi ọma, na-ege ntị stories_it repulses m! Ndị mụrụ m zụlitere m ka m ghara ịhụ na agba(s)… anyị niile bụ otu onye; anyị niile na-abịa si dị iche iche n'ọnọdụ dị iche iche nke ndụ; ọtụtụ n'ime anyị nwere siiri, ọtụtụ siiri ná ndụ; ma otu ọbara aga site anyị veins. Ọ bụ ezie na, M na mgbe kemgbe na “ezighị ezi n'akụkụ nke iwu;” nwanne m nwoke nwere, ọ bụ White, mere ụfọdụ oge n'ụlọ mkpọrọ(10yrs) n'ihi na ụfọdụ ụmụ obere mpụ na na-fụọ kpamkpam nke hà; na o meela maka banyere 15yrs ugbu a; o nwere ebe ihe na nkwonkwo ụkwụ mgbaaka maka awhile(2yrs,) nke mere na ama a mere ndị obodo cops na-esi mara ya nke ọma, na nsogbu ya, mgbe niile, n'oge ahụ. Ọ na-15yrs, na NO mbipụta, na ọ ka na-ego n'anya hassled ta, ọ bụ pathetic; ọ ka na-na-akwụ ụgwọ maka mpụ, ọ bụ ezie na ọ na-ọma dechara ya oge. Ọ bụghị nanị a Black nsogbu, ọ bụ ihe niile anyị na nsogbu. E nwere ọtụtụ ihe na-ezighị ezi na ihe niile taa, na ihu ọma na, n'ezie na anyị enweghị ikike…n'ihi na ọ bụrụ na anyị na-adịghị eme ya n'ụzọ ziri ezi mgbe anyị na-na-ezighị ezi, na-ata ahụhụ n'ụzọ ụfọdụ ma ọ bụ ọzọ. Ọ bụ ezie na, e nwere ọtụtụ ihe ọjọọ ndị mmadụ na ụwa a, onye na enweghị ihe maka ndụ nke onye ọzọ, ohi, Nelly nke niile na agba; anyị mkpa uwe ojii aka agha mpụ; ha na-eme ihe ize ndụ e ndụ ọtụtụ ụbọchị; ma ha akara, ha dị larịị nke ike, enweghị ige ndị mmadụ ntị, echiche nke cockiness; ọ bụ ihe kasị mgbe niile banyere gị bụ ndị ikpe mara, ruo mgbe pụtara ọcha, na ndị nile mba a na-na-emeso dị ka ha na-erughị ka nke ndị uwe ojii(“iwu ukara.”) Ọ ga-Kwụsịnụ! anyị “nnukwu” mba, bụ n'ezie oké n'oge a…malite na nke ọchịchị, trickling ruo obodo uwe ojii.
Back to Eric, ọzọ, ọ dị m oke nwute, na mwute maka ya na ezinụlọ ya na ndị enyi. M nke misfortunate omume…M olileanya na site na ịnọgidesi ike ya na ezinụlọ ya ga-enweta ụfọdụ ikpe ziri ezi, N'ezie ọ nwere ike mgbe dochie Eric.
Ka udo nọyere unu nile.
Lori • December 21, 2014 na 4:20 Abụ • zaghachi
The abụọ paragraf a kwesŽrŽ-asị na m BỤGHỊ ùgwù ọlị! Oops.
AJ • April 8, 2015 na 9:49 Abụ • zaghachi
M na-adịghị ọbụna mara ebe na-amalite. Nke ahụ bụ kpọmkwem otú m na-eche na m na-adịghị ọbụna American ma ịbụ nwa, maara na ndị mmadụ na-na-emegbu emegbu na mgbe ọbụna gbuo site ikike bụ nnọọ obi wrenching, na mgbe ahụ ka mara na otu ikike na-na-pụọ na ndị dị otú ahụ na-eme ka ya ike ikwere na ihe ọ bụla ikpe ziri ezi usoro, n'ezie. M ịghọta na ezinụlọ aka na-emetụta, ma si metụtara ma ọ bụ perpetrators n'akụkụ.
Tammy • April 9, 2015 na 6:31 pm • zaghachi
Bad cops na-eme ya njọ n'ihi ezi cops.
Kianna • Ka 20, 2016 na 4:35 pm • zaghachi
Tụkwasịrị Obi Online Na Indonesia • July 17, 2017 na 5:39 pm • zaghachi
Atọ m ụtọ na-agụ otu isiokwu ga-eme ka ndị mmadụ na-eche.
Ọzọkwa, na-ekele gị maka ikwe ka m ikwu!
music ndetu • July 19, 2017 na 12:25 Abụ • zaghachi
ma, ọ nọrọ ezi ya music na biri ndụ ogologo oge iji na-ide ihe 800 songs ma na-anụ ya musics irigo
si akpa n'usoro pews na-ekwe ukwe guzoro, ebe ya na mbụ nwere
iwu. Na a dị ike na kọmputa, ụfọdụ mics, a digital audio workstation, na a obere etu esi,
onye ọ bụla nwere ike dee ma kesaa music. ma
mgbe ahụ, biakwa obibia nke internet, brọdband, abịakọrọ audio formats na ndị ọzọ
obere media Player emeela ka revolutionary mgbanwe na ọrụ a.